Turkiga oo markele udigey Mareykanka. – Saraar Media
Home›All War›Warka Caalamka›Turkiga oo markele udigey Mareykanka.
Last Updated on February 6th, 2018 at 01:03 pm
Turkiga ayaa markale fariin digniina udirey Maamulka Trump, kusaabsan Ciidameynta Gobolada aduuda Syria iyo Turkigu leeyihiin ee Gobolka Manbij, oo ay kusugan yihiin ciidamo Mareykana oo tiradoodu kabadan tahay ilaa iyo 30,000 askari.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu Gobolka Manbij, kadhigi doono midey ciidamadiisu kataliyaan, sidaasna waxuu sheegay Maanta maruu kahadlayey shir ay isugu yimaadeen golaha xisbigiisa AK, sidookale gobolka Afrin. oo ah mid aydagan yihiin maleeshiyaadka Argagixisada iney talaabada milatari ee turkigu kawado ay tahay midaan kalaabasho lahayn, taasoo dhowaantan mareykanku uga digay milatariga Turkishku iney joojiyaan faro galinta milatari ee gobolka Afrin.
Recep Tayyip Erdogan ayaa canaan kulul dusha uga tuuray Mareykanka iska dhago marinta suaalaha xalinta leh ee Afganistan iyo Iraq, tasoo soo taxneyd ayuu yidhi madaxweynuhu ilaa iyo 18 sanadood.
dhinaca kale Erdogan waxuu mareykanka ku canaantay inuu dagaalkiisu yahay mid kuwajahan dalalka Turkiga,Iran iyo Russia, balse aanu ahayn mid kuwajahan ladagaalanka cadowga caalamiga ee Argagixisada, waana sababta mareykanku ugu faraxsaneyn ayuu yidhi madaxweynuhu guulaha laxaadka leh ee laga gaadhay ladagaalanka Argagixisada
Rag waxaan ku maamuli ama ku ...